अनसनमै केसी मरे भने ओलीलाई महंगो पर्नेछ
आज : २०७६ भदौ ४, बुधबार / Wednesday, Aug 21, 2019
अनसनमा मरेकाहरूको श्रृंखला लामो छ । बीपी कोईराला २९ वा २१ दिनसम्म अनसन बस्नुभयो। शताब्दिऔंसम्मका लागि तिरस्कारका पात्र बनाईएका तत्कालिन राणा प्रमले उहाँलाई रिहा गरि दियो। तर, आयरल्याण्डको मागका लागि संसार मै लामो समयसम्म अनसन बसेका बबी सैंड्स अनसनरत् नै मरें। राणा शासन बढी जनअपेक्षालाई कदर गर्ने थियो कि मार्गरेट थ्याचरको बेलायत,यसबारे छलफल हुँदै गर्ला।
महात्मा गान्धीको सफलताका आँकलन गर्ने अध्येताहरू भन्छने,यदि गान्धीको लडाईं कानूनी राज्यका प्रणेता वा पक्षपोषक ब्रिटीससँग नभएको भए गान्धी किमार्थ पनि सफल हुने थिएनन्। सन् १९६८ मा बीपीले बाराणसीको राजघाटमा आयोजित सम्मेलन “गान्धीज्म एण्ड एशियन च्यालेन्ज” मा बिश्वभरका शान्तिवादी अहिंसक नेताहरूको सामुन्ने भन्नु भएको थियो– “गान्धीको सफलताको धेरै श्रेय बेलायती कानूनी राज्यको मान्यता र मानव अधिकारका प्रति बेलायतको प्रतिवद्धतालाई जान्छ। नेपालमा त राजा महेन्द्रको शासनमा हरेक रात धेरै गान्धीहरूको भ्रुण हत्या हुन्छ ।” त्यहीं गएर बबी सैंड्स अनसनरत् मरे।
ओसामा बिन लादेन मारिए। अमेरिकनले उनको मृत देह समुन्द्रमा फालि दिए। दफन गरिने ठाउँमा हरेक बर्ष मेला न लागोस् भनेर तेसो गरियो। तर, बबी सैंड्सको मुद्दा मरेको छैन। आयरल्याण्डको स्वाधिनताको माग झन्झन् बढ्दो छ।
सवाल राज्यले कसलाई कसरी, कुन रंगमा रंगाई दिएको हुन्छ,सबैले तिनलाई तेसै रंगमा लत्तपतिएको ठान्दैन भन्ने हो। अहिले मेरो सरोकार डा. गोबिन्द केसीको अनसनवारे हो। डा. केसीको मागलाई जनस्तरले आत्मसात गरेको छ। त्यसलाई जायज ठानेको छ। जनताको यस अवधारणालाई राज्यको ब्याख्याले अन्यत्र मोड्न सक्दैन। वर्तमान प्रमज्यूले यत्ति मात्र बुझिदिए हुन्छ।
सुशीला कार्कीलाई माओवादीले न्यायाधीश बनाए। तर, एमालेले सधैं सुशीलालाई बोकेर हिँडे। सुशीला न्यायको आडम्बरमा काँग्रेसको छाला काढ्न चाहन्थिन्। एमालेलाई मन पथ्र्यो। उही सुशीलालाई अहिले नागरिक समाजको नेता हुनु परेको छ! उनले डा. केसीलाई समर्थन गरेकी छिन,यो कुरा एमालेलाई मन नपर्नु स्वभाविकै हो।
यस्तो लोभीपापीको खेल भैरहन्छ। प्रम ओली तत्क्षणका यस्ता कुराहरूमा पर्नु हुन्न। मैले माथि भनें– बबी सैंड्स अनसनरत् मरें। तर उनले उठाएको मुद्दा मरेको छैन। भोलि डा. केसी पनि मर्न सक्छन्। निःसन्देह उनको मृत्यूबारे प्रम ओलीले कुनै ज्यान मुद्दा बेहोर्नु पर्दैन। तर, डा. केसीले उठाएका सवालहरूमा आफ्नो कल्याण देख्ने जनताका भरोसा मर्नेछन्। डा. केसीको देह मर्नेछ, तर उनमा आफ्नो कल्याणको आशय देख्नेहरूको भरोसा मर्नेछ। त्यो घडी प्रमका लागि सुखद हुने छैन। गाउँघरका हाट बजारमा बौलहा मजनूँहरूलाई ससाना केटाकेटी बच्चाहरूले गिज्याउँदै लख्ट्ने गरे झैं प्रम ओली आम जनताको च्याँग्रा लखे्ट्याईमा पर्नु हुनेछ। आउने चुनावमा हरेक मतदाताको छोपिएको अनुहारमा डा. केसीको मुखुण्डोको सामना गर्नु पर्ने हुन्छ।
प्रम ओलीजीलाई दक्षिण एशियाकी एक राजनेताको बिलौना बताउन चाहन्छु। बेनजीर भुट्टो, उनको सामन्ति पारिवारिक पृष्ठभूमिका बारेमा भनी रहनु पर्दैन। उनी भ्रष्ट छिन् भन्ने सर्वत्र प्रचार भयो। बिरोधीहरूले खुब उचाले यस सवाललाई। एक भारतीय टेलिभिजन पत्रकारसँगको अन्तर्वार्तामा उनले वेदनासाथ भनिन्– ‘म पुस्तैनी परम्परा अनुसार काँसको गिलासमा पानी पिउँथे। सबैलाई थाहा थियो कि बेनजीर घरमा रहँदा काँसको गिलासमै पानी पिऊँछिन् भनेर। बिभिन्न अवसरमा मैले भेंटघाट गरिरहँदा काँसको गिलास समाती बसेको फोटोहरू अखवारहरूमा छापिएको हुन्थ्यो। यही फोटोलाई देखाएर बिरोधीहरूले हल्ला फिंजाए– बेनजीर त यौन शक्ति बढाउन सुनको झोल बनाईएको पानी पो पिऊँने गर्छिन् र पो त दुनियाँले थाहा नपाउन भनेर काँसको गिलासमा हालेर पिऊने गर्छिन्।’ बेनजीरले भनेकी थिईन– जनताले यस्ता बेहुदा कुरालाई पत्याएर मलाई प्रश्न गर्ने गर्थे–“मेहतर्मा आप तो सोनेका सोरबा पिती हैं!”
यस्तो हुन्छ,प्रचारका अगाडि पराधिन जनता। डा. केसी मर्न सक्छन्। उनले मृत्यू मै प्रारब्ध देखेको हुन सक्छ,तर यस पछि हुने भरोसाको मृत्यूले आशाहरूको लाश थप्ने छ सर! (जयप्रकाश आनन्दको फेसबूकवालबाट)
२०७५ माघ १७ बिहीबार ११:१६:०० मा प्रकाशित
यो राज्य व्यवस्था टिक्न असम्भव
राजा आउन सजिलै सम्भव देखिन्न र यो राज्य व्यवस्था टिक्न असम्भव , के हामी भविष्यहीन जस्तै नै हो ? कोकोहोलो मच्चाउनै पर्दैन,ढिलो चाँडो तपाइँहरूले नै
राजाले खोक्दा पनि किन तर्सिन थाले शक्तिशाली नेता ?
योगी नरहरिनाथ पिताजीलाई भेट्न आइरहन्थे, आमाले र दाइ दिदीहरूले चर्चा गर्दा मैले योगीजीको नाउँ थाहा पाएको थिएँ । योगी राजा महेन्द्रका उच्च प्रसंशक
पूर्वराजामाथि गम्भीर षडयन्त्रको संकेत
नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रलाई नागार्जुनबाट हटाउने, राजाबादीलाई खरानी पार्ने आदि ध्वाँस दिइरहेकै बेला केही सूत्रहरुले पूर्व
आफ्नो सुरक्षाको प्रत्याभूति भए हिन्दू धर्म मान्न प्रचण्ड तयार
काठमाडौं । ‘दोस्रो शक्तिशाली नेता’ को राजनीतिक दर्जामा रहेका नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफ्नो सुरक्षाको प्रत्याभूति हुनेभएमा वैदिक
झापाका बजारमा पिउन अयोग्य पानीको बिगबिगी
प्रहरीमाथि पारसकाे हातपात प्रकरणः यसरी हुँदैछ छानबिन
पोग्बाले पेनाल्टी मिस गरेपछि म्यानचेस्टर राेकियाे
रवीन्द्र अधिकारीकाे क्षेत्रमा उपनिर्वाचन चर्चाः साझा उम्मेदवारको खोजी
चन्द्रमामा पुग्यो चन्द्रयान-२
नेकपाको सचिवालय बैठक स्थगित, बालुवाटारबाट बाहिरिए नेता
सडक दुर्घटनमा एकको मृत्यु, एक घाइते
फिलिपिन्समा डेङ्गु प्रकोप : आठ महिनामा ८ सयकै मृत्यु
नेमार फर्काउने दौडमा बार्सिलोना
शक्तिशाली बनेपछि ओलीले गरे प्रचण्डलाई अध्यक्ष बन्न प्रस्ताव, के 'सिंगल' अध्यक्ष बन्दैछन ?